MOFA: Defending the interests of the State and the People on the frontlines of the international arena – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Ministry of Foreign Affairs practices an independent, non-aligned and active Foreign Policy based on the Five Principles of Peaceful Co-existence, beingaMinistry which considers the promotion and protection of the interests of the State and the People in the international arena as its utmost responsibility. From the time the present government took over State responsibility, we continued practicing this policy, using different approaches. UsingaPeople-centered diplomacy, we have worked to improve and consolidate relations with neighboring countries with whom we have traditionally had friendly relations; re-establish friendly relations with countries far and near; we have worked hard for promoting national and regional interests by actively participating in ASEAN and regional affairs in accordance with the priorities of Myanmar; we are preparing to cooperate with the UN and international organizations in accordance with our country’s situation and priority needs. There are many actions that the MOFA has undertaken. During the second year term of our Government, it may be seen that there have been many challenges, and many issues that have been resolved in the international area. Therefore, in order to understand the activities of MOFA and the recently formed Ministry for International Cooperation, we have met and interviewed U Kyaw Tin who is the Union Minister for International Cooperation as well as the former Minister of State for Foreign Affairs.
Q: How is the MOFA working for Peace and Development of the country?
As we implement our country’s programs for national reconciliation, peace, uplifting the socio-economic life of the people, and for the transition towards democracy, our job is to get the cooperation and support of other countries. We make strenuous efforts to get the constructive cooperation of the international community by engaging and communicating with other countries as we meet the challenges we are facing.
As diplomats, we provide assistance and support not only for our country’s peace and development, but also for peace and development of the countries of the world. To do this as we try to resolve the challenges we have adoptedadifferent approach which takes into account not only the views and opinions within our country but also the views and opinions of the outside world. In accordance with our approach to practise “people-centered diplomacy”, as we work to promote friendship in our bilateral relations, we work not only in the area of government-to-government relations but also for promoting people-to-people relations, protecting and promoting the interests of the people. In working for the success of our goals, we are utilizing the united strength of the people.
Q: During the second year, what are the priority tasks for the MOFA?
A: During the second year the following priority tasks were performed by the MOFA: –
Promoted friendly relations and cooperation with all countries around the world.
Secured technical and financial assistances from international and regional organizations for national development.
Worked to boost foreign trade and investments from abroad.
Participated actively in international and regional organizations.
Worked to uplift the image and dignity of the people and the country in the international arena.
Worked to increase our participation in international conventions relating to human rights, climate change, and disarmament.
Worked to protect the interests of Myanmar nationals and former Myanmar Nationals living abroad.
To achieve these objectives, we need capable diplomats. Therefore we have increased the recruitment of Foreign Service personnel and worked to build up the capacity of our diplomats.
We have also provided substantive and necessary administrative support to our diplomats so that they are able to perform their tasks at the diplomatic missions abroad in accordance with their diplomatic ranks.
While noticeable achievements were being attained in our international relations, beginning from the time terrorist attacked our border security forces in Rakhine State large numbers of refugees left our country. The media lashed out with exaggerated and distorted reports. Asaresult, misunderstandings, criticisms and efforts to put pressure on Myanmar developed in the international arena.
If I were to giveafrank assessment, although our government attained significant achievements in foreign relations during its first one andahalf year period, it faced tremendous challenges in the second half of the second year.
Therefore, the MOFA is responding to these challenges and pressures in the international arena. In addition, we are making efforts to show progress on the ground. In this way we are placing special focus on improving our international relations.
Q: Has there been any changes or challenges in the role of the MOFA during the term of the present government?
A: During the term of our government, the State Counsellor herself has concurrently taken the portfolio of the Union Minister for Foreign Affairs. Thus the coordinating role of MOFA has been further elevated. Countries of the world welcomed, supported and encouraged the new civilian government. During the first one and half years, assistance and offers of assistance surged to ensure the increased success of the democratic transition process. This isasignificant change and progress in the international relations area. In spite of facing enormous challenges in the second half of the second year period, many countries of the world still remained committed and strongly supported Myanmar forasuccessful transition to democracy. However, as Myanmar needs to survive in the international community asacountry which respects her duties and obligations, she needs to handle and resolve her problems in accordance with international norms. For this we will give due regard to the views and opinions of the international community. On the other side, as we need to act in accordance with internal requirements, the need to solve this problem inabalanced manner isabig challenge for our Ministry.
Q: Please tell us about the changes and developments that have taken place in Myanmar’s relations with countries of the world.
A: In assessing Myanmar’s international relations, it may be necessary to recognize two distinct periods: from the time the new government assumed state responsibilities to the time the terrorist attacks occurred on 25 August 2017 and the period beyond that. During the first period, we not only maintained and promoted traditional friendly ties with neighboring countries such as China, India and ASEAN countries, we were able to revive and consolidate our relations with our development partners such as the United States of America and the western European countries. During the first year, the visit of the State Counsellor to the US, we were able to work for the removal of all sanctions imposed against Myanmar.
Similarly, Myanmar was able to further consolidate the Comprehensive Strategic Cooperative Partnership with China and establish not only friendship but also mutual understanding between the leaders.
Asaresult of improved relations with European counties, we were able to end the EU resolution on the situation of Human Rights in Myanmar in 2016 which has been tabled annually at the United Nations General Assembly since 1991. This may be seen asasignificant success during the first year.
However, during the second year, although we were able to further consolidate and improve our friendly relations with China, India, ASEAN countries, and countries in the region, due to the terrorist attacks in Rakhine State, large numbers of refugees left the country. Thus, we had to face misunderstandings. Therefore, our warm relations with Western countries deteriorated. However among countries that had consistently supported and encouraged Myanmar, we have been able to maintain friendly relations and cooperation in areas of mutual interest, with countries which could appreciate the depth and complexity of our challenges. For the promotion of friendly relations with the countries of the world, the basic necessity is to provide support for the exchange of visits of Heads of State and High level delegations. In this regard, our Ministry has been able to perform diplomatic relations as well as prepare necessary background papers of discussion topics in coordination with other relevant Ministries. We were able to make systematic arrangements for these visits to haveaproper balance.
Q: Please tell me about the visits of the President and the State Counsellor during the two year term of this government.
A: Former President U Htin Kyaw paid friendly visits to Laos which assumed the ASEAN chairmanship in 2016, India, China, Vietnam, Singapore, Cambodia and Japan. He also visited Russia to attend the ASEAN-Russia Summit, Mongolia to attend the Asia-Europe (ASEM) Summit Meeting, and Thailand to attend the Royal Cremation Ceremony of Thailand’s late King.
The State Counsellor also visited Thailand, China, the United States, Japan, Singapore, Italy, Vatican City, United Kingdom, Belgium (home of the European Union), India and Australia. In addition, she attended the 71st Session of the United Nations General Assembly, the 28th and 29th ASEAN Summit Meetings and other related meetings in Laos, Outreach Summit between BRICS and BIMSTEC Partners in India, the Royal Golden Jubilee Celebrations of His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddualah in Brunei Darussalam, the 30th and 31st ASEAN Summit Meeting and other related meetings in the Philippines, the Belt and Road Forum for International Cooperation in China, the ASEAN-APEC Leaders’ Informal Dialogue in Vietnam, the 25th ASEAN-India Commemorative Summit and the celebration of the 69th Republic Day of India in India, and the ASEAN-Australia Special Summit in Australia.
Q: Please also tell us about the visits of foreign dignitaries to Myanmar.
A: Heads of State from Singapore, India, Lao PDR, the Philippines, Mongolia, Cambodia and Vietnam, and His Holiness Pope Francis visited Myanmar. Foreign Ministers from China, Italy, Canada, Japan, India, Thailand, Singapore, Indonesia, Cambodia, Britain, Hungary, US, Norway, Ukraine, Luxembourg, Netherlands, France, Czech and Turkey also visited Myanmar. Other visits included senior officials from China, Indonesia, Vietnam, Singapore, Thailand, Cambodia, European Union, Bhutan, and Sri Lanka. Apart from these visits, there were over 50 visits from aboard. We were able to arrange all these visits to foster bilateral relations and cooperation.
Q: Please tell us about the benefits we gained from these friendly visits.
A: From these friendly visits we received assistance for development of the socio-economic life of the people. We also received loans, technical assistance and financial assistance. During the two years period of the government, the President made one visit and the State Counsellor made three visits to the People’s Republic of China.This reflects how much importance we place on our friendly relations with China. The State Counsellor visited China in November 2017 to attend the Communist Party of China – CPC in Dialogue with World Political Parties High-Level Meeting asaspecial guest which consolidated the friendship between the leaders of both countries.
The Agreement whereby China granted RMB Yuan (1) billion for socio-economic development and the Peace process is one result of the friendly visits.
The mechanism of (2+2) consultations between the Foreign Ministry and Defence Ministry of both countries were held three times. These consultations have assisted in maintaining peace and stability along the border areas, China’s constructive support for Myanmar’s peace process and the joint settlement of border issues.
At the same time the President paidavisit to India, which is one of the important neighbouring as his first goodwill visit toanon-ASEAN country. The State Counsellor also visited India twice within the two-year tenure of the Government thereby fostering closer relations between the two countries and also enhancing increased cooperation with India.
The State Counsellor’s first goodwill visit was to Thailand. During the visit, she discussed matters relating to the protection and promotion of the interests of Myanmar workers. There were also exchanges of visits between the leaders of Myanmar and Viet Nam. Myanmar’s bilateral relations with Viet Nam have been elevated to the level of Comprehensive Strategic Partnership.
The State Counsellor visited Brunei Darussalam and both leaders exchanged views on the enhancement of bilateral cooperation. Both the President and the State Counsellor paid official visits to Japan. These visits served as an impetus in uplifting the traditional bonds of friendship and enhancing bilateral cooperation between Myanmar and Japan.
During the State Counsellor’s visit to Japan, agreement was reached for Japan to give Japanese Yen 40 billion during five years for Myanmar’s transition to democracy and national reconciliation. Agreement was also reached for the Japanese government and Japanese private sector investments to provide duringaperiod of five years Japanese Yen 800 billion for balanced development of urban and rural areas.
The State Counsellor paid official visits to the Headquarters of the European Union, Belgium, Italy, the Holy See, and the United Kingdom in May 2017 aiming at fostering friendly relations and cooperation with partner countries that have consistently supported Myanmar’s cause for democracy.
The challenges and difficulties encountered by Myanmar during its democratic transition as well as matters relating to Rakhine State were cordially discussed during these visits.
Furthermore, as the Government’s endeavours to promote internal peace and national reconciliation processes and matters related to national development were discussed and explained, it resulted in better understanding towards Myanmar. In addition, the establishment of diplomatic relations between Myanmar and the Holy See was announced during the visit to the Vatican City. Asaresult, Pope Francis paid his first state visit to Myanmar in November 2017 which wasahistoric milestone.
Q: Could you tell us some of MOFA’s contributions towards promoting international relations?
A: Myanmar was able to expand diplomatic relations with the countries of the world and to establish mechanisms for consultations at the Foreign Minister level with friendly countries. During the two year period it was able to establish diplomatic ties with Malta, Ecuador, Marshall Islands, Liberia, Guinea, Seychelles and the Holy See.
At present, Myanmar has established diplomatic relations with 121 countries out of 193 countries. In the coming years it will endeavor to promote the development of friendly relations and cooperation with Caribbean and Latin American countries.
Withaview to fostering bilateral relations and cooperation between Myanmar and other friendly countries, Myanmar has been able to establish Foreign Office Consultations Mechanisms with countries such as Australia, Switzerland, Estonia, New Zealand and Columbia. Myanmar is also annually holding Human Rights Dialogue with Japan and the European Union. We have conducted partnership talks with the United States of America. We believe that the conduct of such foreign affairs related discussions on an annual basis would be very beneficial to improve relations and cooperation with respective countries.
Q: How did MOFA respond to challenges encountered in the international arena?
A: Since the current Government took office, the Ministry of Foreign Affairs has given high priority to address the issue of Rakhine that has recently created enormous challenges to Myanmar in the international arena. The Government also established the Advisory Commission on Rakhine State headed by Dr. Kofi Annan in order to findadurable and sustainable solution for the Rakhine issue incorporating both local and international perspectives.
Because of these developments, the draft resolution which had been tabled yearly on the situation of human rights in Myanmar was stopped and the United States lifted its economic sanctions imposed on Myanmar in September 2016.
At this time when our international relations was improving, ARSA terrorist attacks occurred once on9October 2016 and once on 25 August 2017 to draw the attention of the world on the Rakhine issue. Asaresult refugees left their homes which resulted in Myanmar having to suffer misunderstandings, criticisms and pressures for another round. Therefore we had to face the potential danger of our national interest and our sovereignty being threatened.
On 19 September 2017, the State Counsellor invited diplomats to Nay Pyi Taw and gaveaspeech on the Rakhine issue. Also,adelegation led by Vice President U Henry Van Thio attended the 72nd UNGA where he deliveredapolicy speech. In the UN Security Council, an attempt was made to passaresolution regarding the Rakhine issue. National Security Advisor U Thaung Tun, who was also the alternate leader of the Myanmar delegation and the Myanmar Permanent Representative to the UN responded, explained and madearebuttal at the UNSC. We were able to prevent this draft resolution from being adopted. At the 2017 UN General Assembly, OIC tabledadraft resolution on Myanmar but the Myanmar Permanent Representative protested, madearebuttal and demanded that the resolution should be adopted by voting, not by consensus. And also, in December 2017, at the UN Human Rights Council, Geneva, IOC calledaspecial meeting tabledadraft resolution on Myanmar on the Rakhine issue; Myanmar had to try and approach friendly nations for adoption by voting instead of by consensus.
The Union Minister for International Cooperation himself attended the regular annual meeting of Human Rights Council High Level Segment and gaveabriefing on the Rakhine affairs. This year,adelegation led by Union Minister U Thaung Tun from the Office of the Union Government heldaside event, and gaveadetailed explanation forabetter understanding of Myanmar. At the Human Rights Council, discussions on the EU draft resolution on Situation of Human Rights in Myanmar were held, and the Permanent Representative of Myanmar pointed out paragraphs that threatened the sovereignty and categorically rejected the motion.
For the Rakhine issue, what kind of efforts have you made on the regional front?
For the implementation of Dr. Kofi Anan’s Advisory Commission on Rakhine, the MOFA has also cooperated and coordinated with the Implementation Advisory Committee which was formed and headed by Dr. Surakiart Sathirathai. From among the advice given by Kofi Anan, matters related to relations with Bangladesh and countries in the region including ASEAN are being implemented. On 23 November, an agreement was signed between Bangladesh and Myanmar for the verification and acceptance of displaced people from Rakhine. The Foreign Ministry continued negotiations with Bangladesh to establishaJoint Working Unit and the TOR (Terms of Reference) was signed on 19 December 2017 and on 16 February 2018a“Physical Arrangement” for repatriation of displaced persons was signed.
At the regional level, the State Counselor explained about Myanmar’s transition to democracy, efforts to achieve peace and national reconciliation, including the Rakhine issue and the complex and sensitive nature of the challenges being faced in November 2017 at the ASEAN Leaders Conference in Manila, and in March 2018 at the ASEAN-Australia Special Summit.
The State Counsellor, when receiving Foreign Ministers from USA, Japan and UK, and other high level foreign representatives, gave explanatory briefings to continue support for Myanmar’s endeavors for the success of the transition to democracy, Peace and National Reconciliation and also about the situation in Rakhine.
On February 2018, the Union Minister for International Cooperation himself, inaseparate meeting in Singapore, gave explanations to ASEAN Foreign Ministers informally, on developments in Rakhine State and repatriation of displaced persons. After the conclusion of the meeting, inastatement released by the ASEAN Chairman, he indicated inaconstructive manner that the ASEAN Ministers supported the efforts of Myanmar Government to promote harmony and reconciliation between the communities. The Foreign Ministry has established an official website and social network pages and has continuously disseminated “facts on the ground” regarding the Rakhine situation.
Q: During the term of this government, what is being done for protecting the interests of Myanmar nationals abroad?
The Foreign Ministry and Myanmar Embassies, Missions and Consulates are now practicinganew approach called “people-centered diplomacy”. Protecting the interests of Myanmar nationals and former Myanmar citizens living abroad have been our foremost concern. In order for Myanmar nationals to participate and assist in socio-economic developments, necessary help were given including assistance to facilitate entry into the country. Visa requirements for social visits were relaxed to facilitate re-entry of former Myanmar citizens living abroad.
Our embassies, in spite of man power limitations and financial restrictions, are conducting negotiations on cooperating with the corresponding host country regarding benefits of our migrant workers and for illegal migrants to get permission to work legally in the respective countries.
In Thailand, in order to provide more assistance to migrants, we have increased the number of embassy personnel and centers to issue identity cards. Assistance is being given to workers abroad to get compensations for death and injuries in foreign countries. Assistance is also provided for returnee workers who are facing difficulties paying for airfares. Also, we have effectively brought back Myanmar fishermen incarcerated for various reasons who were released after serving time.
Please also tell us what is being done by the Foreign Ministry with regards to demarcating the borders with neighboring countries?
The State Counsellor wishes to finish the unfinished border matters done by previous governments so that future generations will inherit good legacies. She has given directions to give priority to border demarcation matters, especially at this time when relations with neighboring countries are very good.
During the State Counsellor’s visit to Thailand on June 2016, she mutually agreed to speed up the interrupted demarcation of borders between the two countries.
In the Naga region of the Myanmar-India border, in order to stop disputes between border pillars 145 and 146 due to indistinct delineation, more defined distinct borders pillars were erected jointly on March 2017. The Friendship Bridge that crossed Myanmar-Laos was built and an agreement was reached at the meeting of Foreign Ministers of the two countries to mark and record the border demarcating line of the river on the bridge.
A protocol was signed in November 2017 in reference to agreement 1998 to demarcate land on the northern part of Naf river. The appendix to the 2007 Myanmar-Banngladesh-Naf River Border Agreement was also signed on that date.
I would like to know what has been done to upgrade the skills of diplomatic personnel?
To implement our foreign policy, we need sharp, bright, and good diplomats. To develop our human resources, our Ministry and other Ministries are giving training courses and workshops. 12 workshops and courses in diplomatic skills, English language and foreign affairs were given by local and foreign invited experts to officers and clerical staff. Courses and training of 50 newly recruited officers were given on advanced diplomatic skills and in international affairs.3Basic Diplomatic Skills training courses were conducted for 603 trainees.
Do you have any plans to enable your diplomatic personnel to perform their duties more effectively?
For Myanmar diplomatic personnel to carry out their duties to the fullest and concentrate and function smoothly, Embassies, Permanent Missions and 13 Consulates in foreign countries, diplomatic personnel and their families were given opportunities to obtain health insurances and now, altogether 19 out of 44 missions have health insurances for the staffs and families. Due to instructions by the State Counsellor, by the 2018-2019 fiscal year education allowance amounting to two thirds of the tuition fee will be covered for the children of embassy staff between the ages of5to 18. This isaunique improvement.
State-owned old buildings of Myanmar Embassies in foreign countries are being renovated, rebuilt and beautified to enhance their beauty to be in line with diplomatic standards and dignity.
We have noticed that you have established The Ministry of International Cooperation. Would you care to elaborate on this?
Since the civilian government took office, international community has shown interest to increase assistance and support. Exchange of visits from foreign countries has soared up sharply. Asaresult, our international relations duties have increased. It is alsoatime when we are facing the highest level of criticism and pressure in the international arena. In order to be able to work with international organizations in all sectors, we need to coordinate with the Foreign Ministry in line with the foreign policy. Together with the Foreign Ministry, in our actions to deal with international issues, we are acting not only from the political perspective but also from the economic perspective. Thus our Ministry was established on 23 November 2017.
However, we are cooperating and working closely under the roof of the Foreign Ministry, and also functioning with the budget of the Foreign Ministry and its staff structure. The Ministry for International Cooperation is dealing not only with subjects under the International Organizations and Economic Departments, it is also working in regional and sub-regional matters of ASEAN, BIMSTEC, and the Mekong Cooperation Programmes, and economic relations with foreign countries, giving priority to all these matters.
Please tell us about the activities and involvement of the Ministry of Foreign Affairs in regional organizations?
Myanmar is enthusiastically and actively participating in regional organizations such as ASEAN, BIMSTEC, Greater Mekong Cooperation Program, Irrawaddy-Chao Phraya-Mekong Economic Strategy, Mekong- Lancang Cooperation Program, Mekong-Japan Cooperation, Mekong-Korea Cooperation Plan, and the Lower Mekong Initiative.
In participating in these activities Myanmar is not only looking for the interests of its citizens, but it is also working for regional interests.
On 10 January 2018, Vice President U Myint Swe ledadelegation and attended the 2nd Mekong-Lancang Cooperation Leaders Meeting held in Phnom Penh, and asaresult,US $2.4 million was received for 2017 for development of 10 projects under Mekong-Lancang Cooperation Program. Myanmar is also participating in the 7-member BIMSTEC Cooperation Framework. In 2016,adelegation headed by State Counsellor attended the BIMSTEC-BRICS Outreach Summit and the BIMSTEC Leaders Retreat held in Goa, India. In August 2017,adelegation headed by the Minister of State for Foreign Ministry attended the 15th Ministerial Meeting held in Kathmandu, Nepal.
In November 2017, our Ministry successfully hostedaMeeting for ASEM Foreign Ministers consisting of 51 countries and2organizations. This shows the capabilities Myanmar diplomats.
A separate informal meeting was held to giveabriefing about the Rakhine issue. Asaresult, we were able to enhance the understanding of the international community about the delicate and complex nature of Myanmar’s challenges.
In conclusion, what are your future plans in foreign relations? Is there anything you would like to add?
Regarding the Rakhine issue, the international community, instead of criticizing and fostering hatred, it should adoptaconstructive approach in solving the problem and avoid making the problem worse. Also, we would like to urge to focus more on solving the problem.
In the international arena in order to overcome the challenges we are facing, we will work hard to show the developments on the ground with the support of our friendly nations who understand the complex and sensitive nature of our country’s challenges. We will continue to strive hard with the united strength of our ethnic brothers and sisters.
နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများ၏အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေး မျှော်မှန်းချက်ကို ဦးထိပ်ထား၍ ဆောင်ရွက်နေသည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေး မျှော်မှန်းချက် (Vision) ကို ဦးထိပ်ထား၍ ဆောင်ရွက်နေသည့် ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ပြီး မူကြီးငါးရပ်အပေါ် အခြေခံလျက် ”လွတ်လပ်၍ တက်ကြွပြီး ဘက်မလိုက်သော နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ” ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည်။
လက်ရှိအစိုးရတာဝန်ယူပြီးချိန်မှ စတင်ကာ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး အကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ချဉ်းကပ် ဆောင်ရွက်ပုံများကို ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
ပြည်သူကိုဗဟိုပြုသည့် သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို အစဉ်အလာအရ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသည့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုခိုင်မာလာစေရေးအတွက်သာမက အနီးအဝေးတွင်ရှိသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ များ အားလုံးနှင့်လည်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၊ အာဆီယံနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားသာမက ဒေသအကျိုးစီးပွား အတွက်လည်း ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ရေး၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အခြေအနေနှင့် ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်များ နှင့်အညီ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက် များစွာရှိပြီး ယခုအစိုးရ၏ ဒုတိယ တစ်နှစ်တာသည် စိန်ခေါ်မှုများစွာ၊ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာပေါ်တွင် ဖြေရှင်းပေးရမှုများစွာကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို မြင်တွေ့ရသည့်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် မကြာသေးမီက ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ထားခဲ့သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက် များကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
မေး။ ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘယ်လို လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေသလဲ ဆိုတာ သိလိုပါတယ်ရှင့်။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနကနေ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြည်သူများရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ရရှိရေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှု တွေကို ကြိုးပမ်းဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ ထိတွေ့ဆက်သွယ်ပြီး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
သံတမန်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သာမက ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပါ ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြဖို့နဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ စိန်ခေါ်မှု တွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ ပြည်တွင်းအမြင်နဲ့သာမက ပြည်ပအမြင်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြောင်းလဲချဉ်းကပ်ပါတယ်။ ပြည်သူဗဟိုပြု သံတမန်ရေးချဉ်းကပ်မှုနဲ့အညီ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး မြှင့်တင်ရာမှာ အစိုးရချင်း ဆက်ဆံရေးသာမက ပြည်သူချင်းဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ရေး၊ ပြည်သူများ အကျိုး ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးနဲ့ မိမိတို့ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ဖို့ကြိုးပမ်းရာမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ စုပေါင်းအင်အားကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
မေး။ ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ဒုတိယ တစ်နှစ်တာအတွင်းမှာ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေး လုပ်ငန်းတွေအဖြစ် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်နေပါသလဲရှင့်။
ဖြေ။ ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မြှင့်တင်ဖို့၊ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေ နည်းပညာနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေ ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ ရရှိစေဖို့၊ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို မြှင့်တင်ဖို့၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒေသ ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဖို့၊ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးတို့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ပြန်လည်မြင့်တက်လာစေဖို့၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ လက်နက် ဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းတွေမှာ တိုးမြှင့်ပါဝင်ဖို့၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ နိုင်ငံသားဟောင်းတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ စတာတွေကို ဦးစားပေးအနေနဲ့ ဒုတိယတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်ဝဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်တဲ့ သံတမန်တွေ လိုအပ်တာမို့ သံတမန်ဝန်ထမ်းတွေကို အင်အားတိုးချဲ့ ခန့်အပ်တာ၊ သံတမန်တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်တာတွေနဲ့ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ မြန်မာ သံရုံးတွေမှာ သံတမန်အဆင့်နဲ့ညီတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်တဲ့ ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးမှုတွေကို သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကြိုးပမ်းမှုတွေ ကနေသိသာတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရနေတဲ့အချိန် ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်ခြားစောင့် လုံခြုံရေးတပ်တွေကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကစပြီး ဒုက္ခသည် အမြောက်အမြား တိမ်းရှောင်မှု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာတွေကနေ ချဲ့ကားထိုးနှက်မှုတွေ လွန်လွန်ကဲကဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖိအားပေး ဝေဖန်မှု တွေနဲ့ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှန်အတိုင်းဝေဖန်သုံးသပ်ပြရမယ်ဆိုရင် အစိုးရသက်တမ်း ပထမ တစ်နှစ်ခွဲ ကာလမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယနှစ်ဝက်ပိုင်းမှာတော့ ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ ဖိအားတွေကို နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွေမှာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာတွေအပြင် မြေပြင်မှာ လက်တွေ့ တိုးတက်မှုပြနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အထူး အာရုံစိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
မေး။ ။ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာရော ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှု တွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိလာပါသလဲရှင့်။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တာဝန်ကို တွဲဖက်တာဝန်ယူထားတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု အခန်းကဏ္ဍက ပိုပြီး မြင့်မားလာခဲ့ပါတယ်။ အရပ်သားအစိုးရသစ် တာဝန်ယူလာခဲ့တဲ့အပေါ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက ကြိုဆို ထောက်ခံ အားပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပိုအောင်မြင်ဖို့ အစိုးရသက်တမ်း ပထမ တစ်နှစ်ခွဲကာလမှာ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေ၊ အကူအညီ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက် များပြားလာခဲ့တာဟာ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍအတွက် ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲတိုးတက် မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယနှစ်မှာလည်း စိန်ခေါ်မှုတွေ ကြီးကြီးမားမား ကြုံတွေ့နေရသည့်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းမှုအောင်မြင်ဖို့ ဆက်လက် အားပေးကူညီတာတွေကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားရဲ့ ကတိကဝတ် တွေ ရှင်သန်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း တာဝန်သိနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ရပ်တည်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ လျော်ညီအောင် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို အလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ပြည်တွင်းအခြေအနေ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိနေတဲ့အတွက် ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့ ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆက်ဆံရေးအနေအထား တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ အကြောင်း ကိုလည်း သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး အခြေအနေဟာ အစိုးရသစ်တက်ပြီးခါစကနေ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု စတင်ပေါ်ပေါက်တဲ့ အချိန်ကာလနဲ့ အဲဒီကာလ နောက်ပိုင်း အခြေအနေဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲရှုမြင်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပထမအနေအထားကတော့ အစဉ်အလာအရ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေ၊ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို ဆက်လက်ခိုင်မာစေဖို့ တိုးမြှင့် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်သစ် နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အနောက် ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည် မြှင့်တင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမနှစ်အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေ အားလုံးကို ဖယ်ရှား နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပဲ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေးကို ပိုမို ခိုင်မာစေနိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအပြင် အပြန်အလှန် နားလည် ယုံကြည်မှုကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ ဥရောပသမဂ္ဂက ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကစတင်ပြီး နှစ်စဉ် တင်သွင်းခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ အဆိုမူကြမ်း တင်သွင်းမှုကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှာ အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဟာ ပထမနှစ်အတွင်း ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မှုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစိုးရသက်တမ်း ဒုတိယနှစ်အတွင်းမှာတော့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေ၊ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ ပိုပြီးခိုင်မာအောင် တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် လူတွေအများအပြား တိမ်းရှောင်မှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့အတွက် အထင်အမြင် လွဲမှားမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ နွေးထွေးမှုတွေ လျော့ကျလာခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးကို အစဉ်တစိုက် အားပေး ထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံတွေအနက်ကနေ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနက်နဲမှုတွေကို နားလည်မှုပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့တော့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးနဲ့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေ မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ နှစ်နိုင်ငံအကြား နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေ၊ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးတွေ အပြန်အလှန် သွားရောက်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနက သံတမန် ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ရော၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ပါ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်တွေ ဘက်ညီမျှတစေဖို့ စနစ်တကျနဲ့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ အစိုးရသက်တမ်း နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တို့ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်တွေကို ပြောပြပေးပါရှင့်။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့ အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ လာအိုနိုင်ငံအပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတွေကို ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်တွေ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အာဆီယံ-ရုရှားထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ဖို့အတွက် ရုရှား နိုင်ငံနဲ့ အာရှ-ဥရောပ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ဖို့အတွက် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ၊ နတ်ရွာစံ ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ တော်ဝင်ဈာပန အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ အီတလီနိုင်ငံနဲ့ ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ ဥရောပသမဂ္ဂဌာနချုပ်တည်ရှိရာ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကို တရားဝင်ခရီးစဉ်တွေအဖြစ် သွားရောက်ခဲ့ပါ တယ်။
ဒါ့အပြင် (၇၁)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၊ လာအိုနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ (၂၈)ကြိမ်မြောက်နဲ့ (၂၉)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ ဆက်စပ်အစည်းအဝေးတွေ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကျင်းပ ခဲ့တဲ့ Outreach Summit Between BRICS and BIMSTEC Partners၊ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ဘရူနိုင်းဘုရင်ရဲ့ နန်းစံသက် နှစ် (၅ဝ)ပြည့် ရွှေရတုအခမ်းအနား၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ အကြိမ် (၃ဝ)မြောက်နဲ့ (၃၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများနဲ့ ဆက်စပ် အစည်းအဝေး များ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ APEC ခေါင်းဆောင်များနှင့် ASEAN ခေါင်းဆောင်များအကြား အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး (၂၅)နှစ်ပြည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ (၆၉)နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ အထူးထိပ်သီး အစည်းအဝေး စတာတွေကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ဧည့်သည်တော်တွေနဲ့ လာရောက်မှု အခြေအနေတွေကိုလည်း ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံကို စင်ကာပူ၊ အိန္ဒိယ၊ လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ် တို့က နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး His Holiness Pope Francis တို့ရဲ့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်တွေ၊ တရုတ်၊ အီတလီ၊ ကနေဒါ၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗြိတိန်၊ ဟန်ဂေရီ၊ အမေရိကန်၊ နော်ဝေ၊ ယူကရိန်း၊ လူဇင်ဘတ်၊ နယ်သာလန်၊ ပြင်သစ်၊ ချက်၊ တူရကီ နိုင်ငံတို့က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်တွေနဲ့ တရုတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဘူတန်၊ သီရိ လင်္ကာ နိုင်ငံတို့က အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ခရီးစဉ်တွေအပါအဝင် ပြည်ပကနေ တရားဝင်လာရောက်တဲ့ ခရီးစဉ် ၅ဝ ကျော်ကို အောင်မြင်စွာနဲ့ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးတွေ မြှင့်တင်ပေးဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် တွေကနေ ရရှိလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်း သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်တွေကနေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကူအညီတွေ၊ ချေးငွေတွေ၊ နည်းပညာနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ အကူအညီတွေ ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရ သက်တမ်း နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ကြိမ်နဲ့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ခရီးစဉ် သုံးကြိမ်တိုင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ချစ်ကြည်ရေး အလေးထားမှုကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ပေကျင်းမြို့မှာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လကုန်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံရေးပါတီများ၏ အဆင့်မြင့် ခေါင်းဆောင် များ ဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း တရုတ်အစိုးရရဲ့ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံဘက်က တရုတ်ယွမ်သန်း ၁ဝဝဝ အကူအညီပေးအပ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတာဟာ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်တွေကနေ ရရှိတဲ့အကျိုး ရလဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံအကြား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးတွဲ ဦးဆောင်တဲ့ (၂+၂) အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲ ယန္တရားကိုလည်း သုံးကြိမ်တိုင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဆွေးနွေးခဲ့မှုကြောင့် နယ်စပ်ဒေသတွေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် တွေမှာ တရုတ်နိုင်ငံက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နဲ့ နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် တွေ ပူးတွဲဖြေရှင်းဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အရေးပါတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ အိန္ဒိယကိုလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက အာဆီယံပြင်ပ ပထမဆုံးချစ်ကြည်ရေးခရီးအဖြစ် သွားရောက်ခဲ့သလို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း အစိုးရ သက်တမ်း နှစ်နှစ်တာအတွင်း နှစ်ကြိမ်သွားရောက်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကို ပိုမိုနီးကပ်ခိုင်မာစေခဲ့ သလို အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဆိုရင် အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း စင်ကာပူနိုင်ငံကို ချစ်ကြည်ရေး သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့လည်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပထမဆုံး တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားတွေရဲ့အကျိုး ပိုမိုကာကွယ် မြှင့်တင်ရန် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနဲ့လည်း နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် အပြန်အလှန်သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေးအဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံနဲ့လည်း နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကိုလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရော၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပါ တရားဝင်ခရီးတွေ သွားရောက်လို့ အစဉ်အလာအရ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို မြှင့်တင် နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ခရီးစဉ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ငါးနှစ်အတွင်း ဂျပန်ယန်း ဘီလီယံ ၄ဝ အကူအညီပေးဖို့၊ မြို့ပြနဲ့ကျေးလက် ဟန်ချက်ညီညီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဂျပန် အစိုးရရဲ့ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အားလုံးပေါင်းပြီး ငါးနှစ်အတွင်း ဂျပန်ယန်း ဘီလီယံ ၈ဝဝ ပေးအပ်သွားဖို့ သဘောတူညီမှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးမှာ အစဉ်တစိုက် အားပေးထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဖက်သစ် နိုင်ငံတွေနဲ့လည်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေကို တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မေလမှာ ဥရောပသမဂ္ဂဌာနချုပ်တည်ရှိတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ အီတလီနိုင်ငံ၊ ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံနဲ့ ဗြိတိန် နိုင်ငံတွေကို တရားဝင်ခရီးစဉ် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ခရီးစဉ်တွေမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွင်း ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စအပေါ် ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက် မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာတွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားခွင့် ရခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် နားလည်မှုမြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အီတလီခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံ (Holy See) တို့အကြား သံတမန်အဆက်အသွယ် ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံး ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက အောင်မြင်စွာ လာရောက်ခဲ့ခြင်းဟာ သမိုင်းဝင်ထူးခြားမှုတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး တိုးတက်စေဖို့အတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း သိပါရစေရှင့်။
ဖြေ။ ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့ သံတမန်ဆက်သွယ်မှုတွေ တိုးချဲ့နိုင်ဖို့နဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချင်း ဆွေးနွေးမှု ယန္တရားတွေ တိုးချဲ့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်နှစ်တာအတွင်း မော်လ်တာနိုင်ငံ၊ အီကွေဒေါနိုင်ငံ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုနိုင်ငံ၊ လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂီနီနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆေးရှဲလ် နိုင်ငံ၊ Holy See (ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံ)တွေနဲ့ သံတမန် ဆက်သွယ်မှုတွေ တိုးချဲ့ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါ တယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၉၃ နိုင်ငံအနက် သံတမန်အဆက်အသွယ် ထူထောင်ပြီးတဲ့နိုင်ငံ ၁၂၁ နိုင်ငံအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်တွေမှာ ကာရေဗီယံနိုင်ငံတွေ၊ လက်တင် အမေရိကနိုင်ငံတွေနဲ့လည်း ပိုမို ခင်မင်ရင်းနှီးမှု ရရှိလာအောင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မြင့်မားအောင် ကြိုးပမ်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ကြည်ရင်းနှီးပြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မြှင့်တင်ဖို့ အစိုးရအနေနဲ့ ဩစတြေးလျ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အက်စတိုးနီးယား၊ နယူးဇီလန်၊ ကိုလံဘီယာစတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဆွေးနွေးမှု ယန္တရားတွေ (Foreign Office Consultations) ကို ထူထောင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဂျပန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂတို့နဲ့လည်း လူ့အခွင့်အရေး ဆွေးနွေးမှုတွေ နှစ်စဉ် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့လည်း နှစ်နိုင်ငံအကြား မိတ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံခြားရေးဆွေးနွေးမှုတွေ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ အများကြီး အကျိုးရှိစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မေး။ ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွေမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အစိုးရတာဝန်စတင်ယူရစဉ်ကတည်းက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ ရခိုင်အရေးကိစ္စကြောင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဦးစားပေးကိုင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်း အမြင်သာမက နိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့ ပေါင်းစပ်သုံးသပ်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့မယ့် ဖြေရှင်းမှုမျိုး ရရှိစေနိုင်ဖို့ အတွက် ဒေါက်တာကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတိုးတက်မှုတွေအတွက် အီးယူကနေ နှစ်စဉ်တင်သွင်းနေတဲ့ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ အဆိုမူကြမ်းကို အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့အပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်း ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေ အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေ အခြေအနေကောင်းမွန်လာချိန်မှာ ရခိုင်ပြဿနာကို ကမ္ဘာက အာရုံစိုက် လာစေဖို့ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ တစ်ကြိမ်၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာ တစ်ကြိမ် ARSA အဖွဲ့ရဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေရပ် တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးမှုတွေ ဖြစ်လာပြီး နိုင်ငံတကာက အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေ၊ ဖိအားပေး ဝေဖန်မှု တွေ တစ်ကျော့ပြန်ခံစားခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားနဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးလာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ပြည်တွင်းပြည်ပ မျက်နှာစာ အသီးသီးမှာ ကာကွယ် တုံ့ပြန်ရှင်းလင်းတာ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်အခြေအနေတွေ အသိပေးကာ ချဉ်းကပ်စည်းရုံးတာတွေကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ နေပြည်တော်ကို သံတမန်တွေ ဖိတ်ကြားပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ (၇၂) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာလည်း ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ဦးဆောင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မူဝါဒရေးရာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့အပြင် လုံခြုံရေးကောင်စီမှာလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနဲ့ စပ်လျဉ်းလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုတင်သွင်းဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းကို အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးသောင်းထွန်းနဲ့ နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်တို့က တုံ့ပြန်ရှင်းလင်းပြောကြားမှုတွေကို လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ လုံခြုံရေးကောင်စီကနေ အဆိုမူကြမ်းဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုကို တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံမှာလည်း အိုအိုင်စီကနေ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းတင်သွင်းခဲ့ရာမှာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က တုံ့ပြန်ပြောကြားကန့်ကွက်ခြင်း၊ တူညီ ဆန္ဒဖြင့် အတည်မပြုနိုင်စေရန် မဲခွဲရန် တောင်းဆိုခြင်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှာ ဂျီနီဗာမြို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာလည်း အိုအိုင်စီက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူး အစည်းအဝေး ခေါ်ယူပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စအပေါ် အဆိုမူကြမ်း တင်သွင်းခဲ့ရာမှာလည်း တူညီဆန္ဒဖြင့် အတည်မပြုနိုင်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကို ချဉ်းကပ်စည်းရုံးပြီး မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင်လည်း လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ နှစ်စဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးမှုကဏ္ဍသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ကလည်း အစည်းအဝေးကာလ အတွင်း Side Event တစ်ခုကျင်းပ၍ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိုမို နားလည်မှုရှိစေရန် ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ အီးယူကနေ တင်သွင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းအပေါ် ဆွေးနွေးရာမှာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က အဆို မူကြမ်းပါ အချုပ်အခြာအာဏာကို တိုက်ရိုက် ခြိမ်းခြောက်ရာရောက်တဲ့ စာပိုဒ်တွေကို ထောက်ပြခဲ့ပြီး မူကြမ်းကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြတ်သားစွာနဲ့ပယ်ချခဲ့ရပါတယ်။
မေး။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသတွင်းမျက်နှာစာမှာရော ဘယ်လို ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါလဲ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒေါက်တာ ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ဖို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Dr. Surakiart Sathirathai ခေါင်းဆောင်တဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့နဲ့လည်း ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုဖီအာနန် ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေအနက် ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများနဲ့ အာဆီယံ အပါအဝင် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများနဲ့ ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ တိမ်းရှောင်သွားသူတွေကို ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေး အစီအစဉ်တစ်ရပ် မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအကြား ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ပူးတွဲ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့ Terms of Reference ကို ၂ဝ၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ နဲ့ တိမ်းရှောင်သွားသူတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်နိုင်ငံကနေ ပြန်လည်ခေါ်ယူရေးအတွက် လက်တွေ့အစီအစဉ် (Physical Arrangement) ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ နှစ်နိုင်ငံအကြား လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေသတွင်းအဆင့်မှာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ က မနီလာမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးမှာ လည်းကောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မတ်လမှာ ဆစ်ဒနီမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကိစ္စအပါအဝင် စိန်ခေါ်မှုများရဲ့ သိမ်မွေ့နက်နဲမှုတွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အောင်မြင်ဖို့နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးကိစ္စတွေမှာ အပြုသဘော ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျပန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ အခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေက အဆင့်မြင့်ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့တွေကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့စဉ်မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု အောင်မြင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက် ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးရေးနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ စင်ကာပူမှာ ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ သီးသန့်စည်းအဝေးမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေနဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေ ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ် တွေကို အလွတ်သဘော ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးအပြီးမှာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြား သဟဇာတဖြစ်စေရေးနဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်များကိုလည်း အာဆီယံဝန်ကြီးတွေက ထောက်ခံကြောင်း အပြုသဘော ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်မှန်၊ အခြေအနေမှန်တွေ သိနိုင်ဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ လူမှုကွန်ရက်တို့ကို တည်ထောင်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် သတင်းအချက်အလက်တွေ ထုတ်လွှင့်ပေးနေသလို ပြည်ပမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတွေကနေလည်း တာဝန်ကျရာနိုင်ငံတွေမှာ ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေတာ၊ သံရုံးအကြီးအကဲတွေက ရှင်းလင်း ပြောကြားတာတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
မေး။ ။ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားအကျိုး စီးပွားတွေကို ကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာရော အစိုးရ လက်ထက်အတွင်း ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ မြန်မာသံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတွေကနေ ပြည်သူကို ဗဟိုပြုတဲ့ သံတမန်ရေးနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို အလေးထား လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေဘက်ကလည်း မိမိနိုင်ငံရဲ့ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကူညီ ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် ပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေး အပါအဝင် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို ပေးနေပါတယ်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေ ပြည်ပြန်ဝင်နိုင်ဖို့ လူမှုရေးဗီဇာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေလျှော့မှုတွေလည်း လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာသံရုံးတွေဟာ ဝန်ထမ်းအင်အား၊ ဘဏ္ဍာငွေအင်အား အကန့်အသတ်တွေ ကြားကနေ ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အကျိုးခံစားခွင့်၊ တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေ တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် စတာတွေ အတွက် သက်ဆိုင်ရာအိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်သမား အရေး ပိုမိုကူညီနိုင်ဖို့ သံရုံးရဲ့ ဝန်ထမ်းအင်အားတွေတိုးမြှင့်ပြီး သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး စခန်းတွေကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပမှာ သေဆုံးတာနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေ ကြုံလာရင်လည်း လျော်ကြေးရရှိအောင်၊ လေယာဉ်စရိတ် ခက်ခဲနေရင်လည်း နိုင်ငံသို့ ပြန်လာနိုင်အောင် စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သလို အကြောင်းကြောင်းနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီး လွတ်မြောက်လာတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား ရေလုပ်သားတွေကို ပြန်လည်ခေါ်ယူတာ၊ အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းတွေပေါ် ရောက်နေတဲ့ လူကုန်ကူး ခံရသူ မြန်မာရေလုပ်သားတွေကို ပြန်လည်ခေါ်ယူပေးတာတွေအပြင် နစ်နာခဲ့ရတဲ့ လုပ်အားခတွေ ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်တာတွေကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ယာယီစခန်းတွေကနေ မိမိတို့ဆန္ဒအလျောက် ပြန်လာလိုသူ တွေကို ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုသူတွေကို စိစစ်လက်ခံပြီး နေရာချထားဖို့ ထိုင်း အစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။
မေး။ ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေး ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေမှု ကိုလည်း သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အရင်အစိုးရ အဆက်ဆက်ကနေ ဆောင်ရွက်နေခဲ့ပြီး မပြီးပြတ်သေးတဲ့ နယ်နိမိတ်ကိစ္စတွေကို ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှသည် နောင်လာနောက်သား များအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အမွေအနှစ်တွေ ပေးလိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး အကောင်းဆုံးအချိန် ရောက်ရှိနေချိန်မှာ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်တဲ့ကိစ္စဟာ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စအဖြစ် လမ်းညွှန်ထားတာရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လက သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ရပ်တန့်နေတဲ့ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေး ကိစ္စရပ်တွေကို ဆောလျင်စွာ စတင်ဆောင်ရွက်ဖို့ နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ် နာဂဒေသမှာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ်(၁၄၅) နဲ့ (၁၄၆) အကြား နယ်နိမိတ် သွယ်တန်းမှု မထင်ရှားတဲ့အတွက် ပြဿနာဖြစ်ပွားနေတာကို တားဆီးရန်နဲ့ ပိုမိုရှင်းလင်းထင်ရှားစေဖို့ ထပ်တိုး မှတ်တိုင်တွေ စိုက်ထူတာကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မတ်လမှာ နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ ကဘော်ချိုင့်ဝှမ်း နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် ကိုးတိုင်ကိစ္စကိုလည်း ဖြေရှင်းဖို့ အိန္ဒိယဘက်က အဆိုပြုချက်ကို ပူးတွဲကွင်းဆင်း တိုင်းတာနေပြီး နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတွေ စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ-လာအို နယ်နိမိတ်မြစ်ကူးတဲ့ ချစ်ကြည်ရေးတံတား တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မြစ်အတွင်း နယ်နိမိတ် အမှတ်အသားကို တံတားပေါ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးမှာ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နတ်မြစ်မြောက်ဘက်ကုန်းပိုင်း နယ်နိမိတ်စာချုပ် ၁၉၉၈ ကို အတည်ပြုတဲ့ စာချွန်လွှာနဲ့ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နတ်မြစ်နယ်နိမိတ် ဖြည့်စွက် အခြေပြစာချုပ် ၂ဝဝ၇ ကိုလည်း ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ နှစ်ဖက်သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးထားပါတယ်။
မေး။ ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းတွေ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း သိပါရစေရှင့်။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ စွမ်းရည်ထက်မြက်တဲ့ သံတမန်ကောင်းတွေ လိုအပ်တဲ့အတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အခြားဝန်ကြီးဌာနက အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းတွေကို သင်တန်းတွေနဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ပေးအပ် နေပါတယ်။ သံတမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း၊ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း တွေကို ပြည်တွင်းပြည်ပက ကျွမ်းကျင်သူတွေ ဖိတ်ကြားပြီး သင်တန်းနဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ၁၂ ခု ကျင်းပ ပေးခဲ့ပါတယ်။ အရာထမ်းသစ် ၅ဝ အတွက် အဆင့်မြင့်သံတမန်ရေးရာနဲ့ နိုင်ငံတကာရေးရာ ဘာသာရပ်တွေ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပြီး အခြေခံသံတမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း သုံးကြိမ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား ၆ဝ၃ ဦး ပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ မြန်မာသံတမန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ပိုပြီးထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ တာရှိပါသလားရှင့်။
ဖြေ။ ။ မြန်မာသံတမန်ဝန်ထမ်းတွေ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို အပြည့်အဝအလေးထား အာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံး၊ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးနဲ့ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး ၁၃ ရုံးမှာ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံ ထားရှိခွင့်တွေ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့လို့ စုစုပေါင်း ၄၄ ရုံးရှိတဲ့နေရာမှာ ၁၉ ရုံးက ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ မိသားစုတွေအတွက် ကျန်းမာရေးအာမခံတွေ ထားရှိပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သံရုံးဝန်ထမ်း သားသမီးတွေအတွက် ပညာသင်စရိတ်ကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က လမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့ အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာမှာ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကစပြီး နိုင်ငံခြားမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အသက်ငါးနှစ်ကနေ ၁၈ နှစ်အထိ သားသမီးတွေရဲ့ ပညာသင် စရိတ်အတွက် ကျောင်းလခရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံကို ထောက်ပံ့ပေး နိုင်ခဲ့တာဟာလည်း ထူးခြားတဲ့ တိုးတက်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးတွေကို သံတမန်ဂုဏ်သိက္ခာအဆင့်နဲ့အညီ တင့်တယ်လှပစေဖို့ သက်တမ်း ကြာမြင့်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်ပိုင် သံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံး အဆောက်အအုံတွေကို မွမ်းမံ ထိန်းသိမ်းတာ၊ အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်တာတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
မေး။ ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ အရပ်သား အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ တိုးမြှင့်ဖို့ စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ ပြည်ပက ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ အပြန်အလှန်လာရောက်မှုကလည်း တစ်ရှိန်ထိုး များပြားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေ များလာခဲ့ပါ တယ်။ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတိုင်းမှာလည်း ဖိအားပေးဝေဖန်မှုတွေကို အမြင့်ဆုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အချိန် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကဏ္ဍစုံမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့အညီ အားဖြည့်ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်တွေကို နိုင်ငံရေးရှုထောင့် အပြင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရှုထောင့်ကလည်း ခြုံငုံသုံးသပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ တိုးချဲ့ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အမိုးအကာတစ်ခုတည်းအောက်မှာ နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေတဲ့အပြင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘတ်ဂျက်နဲ့ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအင်အားကနေ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးဦးစီးဌာန လုပ်ငန်းတွေအပြင်၊ အာဆီယံ၊ ဘင်းမ်စတက်၊ မဲခေါင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ် အစရှိတဲ့ ဒေသတွင်းနဲ့ ဒေသခွဲဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေ၊ ပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေကို အလေးပေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
မေး။။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံ၊ ဘင်းမ် စတက်၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုအစီအစဉ်၊ ဧရာဝတီ-ကျောက်ဖယား-မဲခေါင်စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ၊ မဲခေါင်-လန်ချန်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်၊ မဲခေါင်-ဂျပန်၊ မဲခေါင်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်၊ မဲခေါင်မြစ် အောက်ပိုင်းနိုင်ငံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်စတဲ့ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်။ ပူးပေါင်း ပါဝင်တဲ့နေရာမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွား သာမက ဒေသတွင်း အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးအတွက်လည်း ကြိုးပမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖနောင်ပင်မြို့မှာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ဝ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ မဲခေါင်-လန်ချန်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးကို ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အကျိုးဆက်အနေနဲ့ မဲခေါင်- လန်ချန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်အောက်မှာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက စီမံကိန်း ၁ဝ ခုကို အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၄ သန်း လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အဖွဲ့ဝင် ခုနစ်နိုင်ငံပါတဲ့ ဘင်းမ်စတက်အဖွဲ့ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်အောက် မှာလည်း တက်ကြွစွာနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂိုအာမြို့မှာ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က ကျင်းပတဲ့ BIMSTEC-BRICS Outreach Summit နဲ့ ဘင်းမ်စတက် ခေါင်းဆောင်တွေ သီးသန့်ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကိုလည်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ နီပေါနိုင်ငံမှာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လက ကျင်းပတဲ့ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ဘင်းမ်စတက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနဟာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက မိတ်ဖက်နိုင်ငံပေါင်း ၅၁ နိုင်ငံနဲ့ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုပါဝင်တဲ့ အာရှ-ဥရောပ (ASEM) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် အောင်အောင် မြင်မြင်နဲ့ လက်ခံကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာသံတမန်တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင် ပြည်နယ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလွတ်သဘော အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ကျင်းပပြီး ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှုပ်ထွေးသိမ်မွေ့တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေအပေါ် နိုင်ငံတကာရဲ့ နားလည်မှုကို မြှင့်တင် ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်းက နိုင်ငံပေါင်း ၄၈ နိုင်ငံ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ် ရေညီလာခံကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ အိမ်ရှင်အဖြစ် အောင်မြင်စွာ လက်ခံ ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ဆက်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ဖြည့်စွက် ပြောကြား လိုတာတွေကိုလည်း နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောကြားပေးပါရှင့်။
ဖြေ။ ။ ရခိုင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းအနေနဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင် ရှုတ်ချခြင်းနဲ့ အမုန်းတရားပွားစေမယ့် ပြောဆိုမှုတွေထက် ပြဿနာဖြေရှင်းရာမှာ ကူညီပံ့ပိုးပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ ပြဿနာကိုပိုမို ဆိုးရွားလာစေမယ့် လုပ်ရပ်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းရေးကို အာရုံစိုက်ကြဖို့ ပိုမို လိုအပ်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တိုက်တွန်း ပြောကြားလျက်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျော်လွှားဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် မြေပြင်မှာ လက်တွေ့တိုးတက်မှုကို ပြသနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းသာမက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ အကန့်အသတ်တွေ၊ သိမ်မွေ့နက်နဲမှုတွေကို နားလည် မှုရှိတဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ၊ ပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ စုပေါင်းအင်အားတွေကို အသုံးချခြင်းအားဖြင့် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။